Inay Liverpool Hal Gacan Ku Dhigi Doonto Koobka Premier League, Talada Uu U Soo Jeediyay Man City & Falanqeynta Kulanka Liverpool & Man City Ee Paul Merson | Laacib.net
Inay Liverpool Hal Gacan Ku Dhigi Doonto Koobka Premier League, Talada Uu U Soo Jeediyay Man City & Falanqeynta Kulanka Liverpool & Man City Ee Paul Merson
November 5, 2019 Balaleti 4
Khabiirka Sky Sports Paul Merson ayaa sheega in Liverpool ay hal gacan ku dhigi doonto koobka horyaalka Premier League haddii ay garaacaan Manchester City.
Maqaal uu ku qoray mareegta Sky Sports maanta ayuu si fiican ugu sharaxay kulanka Axada ka dhacaya Anfield, waxaana warbixintiisa ay u qorneyd sida tan:
Indhaha oo dhan waxay ku jeedaan Anfield
Liverpool iyo Manchester City waxay ahaayeen kuwa dhulka yaala kulamadii ay la ciyaareen Aston Villa iyo Southampton laakiin hadana waxa ay heleen jawaabta. Labada kooxood waa kuwa aan ka daaleynin u tartanka horyaalka laakiin ma arko si ay ku soo laaban karto City haddii Liverpool ay badiso kulanka Axada.
Liverpool waxa hogaanka ku qaban doontaa sagaal dhibcood oo nadiif ah guul ay ku gaaraan Anfield, sida aan ku soo aragnay garoonka Villa Park, waa ilaaween sida loo guuldareysto sidaasi darteed ma arko si looga badin karo seddex kulan si City ay u soo noqoto.
Waa kulan aad u weyn. Waa kulan ay Liverpool ku faraxsanaan doonto barbaro taasoo keeni doonta inay lix dhibcood ku sii hogaamiyaan horyaalka iyagoo la ciyaaray City. Marka aad eegto sida ay Liverpool u ciyaareyso waqti xaadirkaan, xoriyada ay goolasha ku dhalinayaan, waa ay igu adag tahay inaan horyaalka u saadaaliyo koox aan iyaga aheyn haddii ay badiyaan.
Dadku waxay leeyihiin waa bilow xilli ciyaareedkan laakiin doodaas waa ay iga careysiisaa. Horyaalka waxa uu bilowday bishii Agoosto, kulan walba waa muhiim, haddii Liverpool ay sagaal dhibcood oo nadiif ah hogaanka ku qabato, waxay dani uu jirtaa Manchester City inay dareenkeeda u weeciso Champions League.
Kulanka Axada waxa uu noqon doonaa kulan adag, kooxdii fursada ugu horeysa iska qasaarisa ayaana laga badin doonaa. Manchester City shabaqa kama ilaashan karto Liverpool, Liverpool iyagana shabaqa kama ilaashan karaa City. Waxa kaliya aan arko waa goolal, xiddigo badan oo weerar tayo leh ayaa garoonka isla soo geli doona. Haddii ay noqoto ciyaar weerar iyo weerar celis ah markaas Liverpool ayaa badin doonta sababtoo ah daafacyada City ma celin karaa seddexda weeraryahan ee Reds.
Pep Guardiola shaki la’aan waa tababare weyn, laakiin kulamada ceynkaan oo kale ah ayaa u noqda tijaao. Inuu ciyaartiisa furfuro ayaa halis noqon doonto sida ay Liverpool hore u soo cadeysay, sidaasi darteed waxaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo falsafadiisa oo uu difaac galo si uu u koontaroolo Liverpool. City kuma qasbana inay badiso, weli tartanka horyaalka waa ay ku jiri doonaan haddii hogaanka uu lix dhibcood sii ahaado, laakiin ma awoodaan in laga badiyo.
Garsooraha Dhexdhexaadin Doona Kulanka Adag Ee Liverpool & Man City Oo La Shaaciyay & Xogta Kulamada Uu Garsooray Labada Kooxood Xilli Ciyaareedkan
Saadaasha Khabiirka Sky Sports Charlie Nicholas Ee Kulamada Kooxaha Ingariiska Ee Champions League Ee Todobaadkan
Liiska Kooxaha U Soo Gudbi Kara Wareega 16ka Champions League Kulamada Afaraad Ee Wareeg Group-yada Ee Isbuucaan La Ciyaarayo
4 responses to “Inay Liverpool Hal Gacan Ku Dhigi Doonto Koobka Premier League, Talada Uu U Soo Jeediyay Man City & Falanqeynta Kulanka Liverpool & Man City Ee Paul Merson”
ciyartas mashegi karo natiijada eykuso dhamaan donto lkn hadan man city kaso badino on hoganka ku qabano 9pontis oo nadiifa wa wax cajiib ah wali waxa mesha kamarnen iney man city udhiman yahiin koxaha waweeno dhan anigana an kuli laso wada ciyaray kaliya hal Everton unba i hartay nasiib wacal xidigahena mr Klopp laso bax tatikadadii cajiibka eheyd pop Guarrdiola wa macalin wen lkn wa baqa qasatan Liverpool adbu uga cabsada markey Anfield jogto waxan rajenaya habenkas ine sadaxdena werar ahadan kuwa cafimad qaba misna jawi guleed Kojima wa mahadsan tahiin lacing.net
Aniga rayiahaan waxay filayaa inay kooxda city guul gaadhayso in kastay ciyaar adgtahay hadan citizens way awoodaa inay isku hawsho siday guul u gaadhi lahayd haday doonayso inay liverpool kula tartanto EPL
Waxan is leeyay man city aya ba
dinaysa sababtoo ah wa koox adag gool haye ederson ayaa badbaadin dooms
Aniga ra,yi ahaanteyda city cid celinayso anfeild ma joogta waa lagu waalanaa mooyane